Ady amin’ny famarinana olona :: Ho sahirana ny vehivavy tanora ho any ivelany • AoRaha
Ady amin’ny famarinana olona Ho sahirana ny vehivavy tanora ho any ivelany
Tsy mora ho an’ny vehi­vavy tanora ny hiala eto Mada­gasi­kara. Misy ny fandraisana fepetra ataon’ny fanjakana hisorohana ny famarinana olona amin’ny tsy rariny. Tsikafonina manomboka eny amin’ny fanamboarana pasipaoro ny antontan-taratasy momba ny anton-dian’ny vehivavy raha mikasa ny hiala eto Madagasikara izy.
Ho voasakana avy hatrany ireo mikasa ho any amin’ireo firenena atahorana misy io famarinana olona amin’ny tsy rariny io. “Ato amin’ny fanam­boarana pasipaoro izahay dia efa mijery sy manara-maso akaiky manokana ny vehivavy. Tsy hahazo pasipaoro avy hatrany izay mampiahiahy ny momba azy. Raha toa ka manana pasipaoro indray ilay vehivavy dia mbola voatsikafona ny taratasiny rehetra eny amin’ny seranam-piaramanidina. Ho voasakana avy hatrany izay vehivavy mampiahiahy”, hoy ny Contrôleur général Rafano­mezantsoa Roger, minisitry ny Filaminam-bahoaka.
“Arakaraka ny antontan-taratasy any amin’ilay vehi­vavy no hahafahany mivoaka na tsia an’i Madagasikara. Izay mieritreritra ny hiasa any amin’ireo firenena mampa­nahy toa ny any amin’ireo firenena arabo sy any Shina dia misy fanadihadiana lalina ataon’ny minisiteran’ny Asa vao afaka mandeha.
Ny vehivavy manambady kosa dia tsy maintsy misy fahazoan-dalana avy amin’ny vadiny vao mahazo miala eto Madagasikara”, hoy ny loharanom-baovao iray.
Fikorontanan’ny bakalôrea :: Noesorina tamin’ny toerany ny talen’ny Ofisin’ny Bakalôrea
Baolina kitra – « CHAN 2020 » :: Resin’ny Barea tamin’ny isa 2 noho 0 ny Zanakala FC